Indlela uDmitry Medvedev elungisa ngayo umntu ongeyena oqhelekileyo eneempahla
UDmitry Medvedev kunye nazo zonke izidima zakhe azikwazi ukuziqhayisa ngebonakalayo emangalisayo. Ngokukhula ngaphantsi komyinge (162 cm), unamahlombe athambileyo kunye nomzimba ongahambisani nawo. Nangona kunjalo, abenzi bakhe bemifanekiso bayakwazi ukukhetha imifanekiso emihle kunye neengubo zikaNdunankulu, ofihla ukungaphumeleli komfanekiso.
Iimfihlelo zesitayela: indlela uDmitry Medvedev egqoka ngayo ukulungelelanisa lo mfanekiso
Isikhundla sosihlalo weRussia Federation sithatha ikhowudi yokugqoka eqinileyo kunye nesitayela se-laconic kwiingubo. Ngokuqhelekileyo, uDmitry Anatolyevich ubonakala phambi kwabaphulaphuli abaninzi kwiimpahla ezinzulu. Kufuneka kuqatshelwe ukuba bahleli ngokugqibeleleyo, nangona kungabonakali umlinganiselo womnini wayo. Imfihlelo yobubele obungenakuqhaqhaleka ihlanganiswe ngamazwi:
Ngokukhula okumodareyithwa, uDmitry Medvedev uhlala ekhetha izikhwama zemibala enye eyenza umgca owodwa. Iingubo ezinjalo zihlala zincinci kwaye zibonakala ziphezulu.
Ukubonakala kweso sibuko kunceda iifestile eziqhelekileyo ngeentolo, zifaka izicathulo phakathi kwesithende.
Ngenjongo efanayo, uDmitry Medvedev phantse uhlala ebopha imida embala. Ngeerameters zayo, unako ukhathaza izitya kunye neprinte okanye imibala engabonakaliyo.
Ijacket ekhethiweyo idlala indima enkulu. Ngokomfanekiso kaDmitry Anatolievich, imodeli eneengqamlezo ezinye ibonwa njengona khetho. Kwaye i-waistline kunye neqhosha lokugqibela liphezulu, ukuze i-floor ihlukane, yenze i-cutout. Le nkohliso iyanceda ekuhleni ukwanda.
Ubukho bamagxa aphezulu - enye imfihlelo ehambelana nokukhethwa kwebhokisi kumntu omfutshane. Kucetyiswa ukuba ukhethe amamodeli aneengqungquthela ezicacileyo ezikhomba phezulu.
UDmitry Medvedev uqonde ngokukhawuleza ukhetho lwezicathulo. Ukhetha izithende eziphakamileyo kunye neqonga, eliyongeza kuye kwi-3 centimeters of growth. Ngesayithi, i-prime minister ihlala ibeka iibhothi eziphantsi eziqhelekileyo kunye neepos.
Ubomi bemihla ngemihla, u-Dmitry Anatolyevich unokuhlala ebonakala kumabhoyi. Intandokazi yakhe yiNike Flyknit Max noNike Air Max. Olu hlobo luyakwenza luphakame ngamanqanaba angama-4.
ULisa Boyarska nomyeni wakhe uMaxim Matveyev baqhawule umtshato? Inyaniso yonke ngobomi bomntu bentombi ka-D'Artagnan
Umfazi kaGregory Leps - "Kufuneka ube ngumdlali ongeyena ukuba ubaleke kumfazi onjalo!"
UKristina Asmus noGarik Kharlamov: ibali lomthando, iifoto ezinqabileyo
Yazi ngubani osesithombeni? Ndifuna ukuguqula umnwe wam etempileni yam, xa uyibona kwisikrini
Ucinga ukuba ngubani lo mbusi? Namhlanje nguye owokuqala weli lizwe
Liyiphi igama lenene likaDmitry Medvedev?
Ikhefu "i-Snow White"
Tart taten nge plums
I-cocktail ngeinanapple kunye ne-rum
Isipinashi, i-asparagus - izakhiwo ezixhamlayo
4 isidlo sakusihlwa, esingenakulimaza umzobo: zama, uhle!
Izimpawu zangaphandle ze-vitamin
Indlela yokuhlamba ukuzonwabisa kunye nokuzuza?
U-Edem Pasquale Bruni: iqoqo lezobucwebe uGiardini Segreti
Oatmeal kunye nemifuno
Akukho talente: UJulia Proskuryakova wagxekwa ngenxa yengoma entsha, ividiyo
Yintoni ebangela ukungabikho kweprotheni?
Izicathulo ezintle kwaye zihle kakhulu ngaphandle kwe-hairpin
Yintoni enceda kunye noko kukuthintela ukunxibelelana